Maevatanàna: fiahiana sosialy ho an’ny mpitantana ny FJKM | NewsMada
Maevatanàna: fiahiana sosialy ho an’ny mpitantana ny FJKM
Nitohy tany Maevatanàna, ny herinandro lasa teo, ny fiaraha-miasa eo amin’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) sy ny fiangonana FJKM. Tanjona ny hahazoan’ny mpiasam-piangonana, toy ny mpitandrina, ny katekista, ny delege ary ny biraom-piangonana fiahiana sosialy, hitondra fampandrosoana ny fiangonana. Niisa 120 ny mpizaika avy amin’ny distrika telo any an-toerana (i Tsaratanàna, i Kandreho, i Maevatanàna) tonga any Maevatanàna.
Anisan’ny mpizaika Rakotoson Joel, nilaza fa “tokony hatao indray mandoa (1 hetsy na 2 hetsy Ar) ny latsakemboka, avy amin’ny vokatra azon’izy ireo, satria tsy tratra ny mandoa isam-bolana. Manampy izany, tsy tokony hohenjanina mafy loatra ny tatao ho an’ireo tsy mahatratra ara-potoana satria mifanalavitra i Maevatanàna sy i Kandreho, ohatra”. Nambaran’ny prezida synodaly Maevatanàna, ny mpitandrina Rakotondramiarana Gilbert, fa “hojerena akaiky izany ary efa miezaka mameno ny banga ny synodam-paritany ho an’ireo tsy mahaloa ny Cnaps”.
Ho an-dRtoa Razafindramanitra Lantonirina, avy amin’ny Cnaps foibe, “tsy very na lanilany foana ny vola arotsaka any amin’ny Cnaps fa misy ny lalàna mifehy azy, izay mivadika ho fanampiana ary efa nohavaozina hanaraka ny toetrandro”.
Anisan’ny nangatahin’ny mpizaika ny hampidirana ao anatin’ny lisitry ny aretina miisa 48 ny tosidra, anisan’ny tena mpahazo ny mpitandrina sy ny katekista. Nangatahina koa ny hametrahana tendron’ny Cnaps any amin’ny distrika hafa.